Apple waxay soo direysaa emayl wata nambarro si ay kuugu siiso bil bilaash ah Apple Music | Waxaan ka socdaa mac
Apple waxay soo direysaa emayl wata nambarro si ay kuugu siiso bil bilaash ah Apple Music
Si sax ah ayaad u aqrisay, haddii waqti kasta lagugu qoro adeegga qulqulka muusikada ee Apple, Apple Music Iyo sabab kasta oo aad u joojisid inaad ahaato, Apple waxay qoreysaa macaamiisha mustaqbalka si aad u wanaagsan.
Apple waxay u direysaa emayllo fara badan dhammaan kuwii hore u adeegi jiray sidaas darteed, hadda maadaama Apple Music dib loo habeeyay isla markaasna taariikhaha kirismaska ​​ay soo socdaan, iyaga fursad si ay ugu laabtaan diiwaangelintooda iyagoo wata hadiyad yar.
Galabta waxaan ka helay e-mayl shirkadda Apple lafteeda oo ka faalloonaysa waxyaabaha soo socda:
Mararka qaar dhamaanteen waxaan u baahanahay nasasho, laakiin wax badan ayaa kaaga dhiman Apple Music oo ay ku jiraan naqshad fudud oo lagu helo muusikada aad aadka u jeceshahay oo aad ku ogaato waxa cusub.
Iskuday markale markale bilaash ah bilaa waajib. Adeegso lambarkan gaarka ah *************** oo soo hel Apple Music-ka cusub. Degdeg maxaa yeelay nambarkaagu wuxuu dhacayaa Diseembar 31st. **
Falcelintaydii ugu horreysay waxay ahayd mid layaab leh waana run inaan tijaabinayay adeegga 'Spotify' dhowr bilood si aan isbarbardhig ugu sameeyo oo aan uga saarey Apple Music Kadib, waxaan dhagsiiyey xiriirka cinwaanka iimaylka waxayna ii jihaysay iTunes Store, halkaas oo aan awooday inaan dhagsiiyo furashada lambarka iyo yaa! Nidaamku wuxuu igu wargelinayaa in Apple ay i siinayso bil lacag bixin ah iyo intaas halkaas laga bilaabo waa inaan bixiyaa 9,99 euro bishiiba haddii aanan ka noqonin rukunka kahor taariikhda lacag bixinta.
Ka taxaddar sanduuqaaga emaylka, maxaa yeelay haddii aad buuxiso shuruudaha Apple, waxaa hubaal ah inaad heli doontid emayl la mid ah haddii aadan horay u helin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Apple waxay soo direysaa emayl wata nambarro si ay kuugu siiso bil bilaash ah Apple Music
Hagaag, waan helay e-maylkaas laakin qaybtooda ay iga siiyaan bil ...
Waan helay shalay oo waan is qoray. Hadda waxaan ka shakisanahay in aan sii wado rukunka ka dib muddada tijaabada, ama maahan. Waxaan u maleynayaa inay ku xirnaan doonto sida aad u isticmaasho bishan. Anigana wax lacag ah kama bixin adeegga wakhti kasta; Kaliya waxaan haystay seddexda bilood ee tijaabada bilaashka ah ...
ITunes iyo Apple Music way ku daaheen Windows Store
Kuwa ugu caansan Apple Music 2017 kan Spain waa: Ed Sheeran, Luis Fonsi iyo Joaquín Sabina